4050-5000mAh Warshad, Alaab-qeybiyeyaal - Shiinaha 4050-5000mAh Soo-saareyaal
Batroolka Li-po 5565113 3.7V 5000mAh Batteriga Taleefanka Bluetooth, Telefon, Power Bank Bank Taleefoonka gacantu
Bateriga dib loo soo celin karo ee loo yaqaan 'PLM-5565113 3.7V 5000mAh' ayaa isticmaalaya waxyaabaha ugu fiican ee leh awooda ugu sareysa ee suurtagalka ah macaamiisha caadiga ah. Amarada OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa codsiyo kala duwan, ganacsigeenu wuxuu daboolayaa inta badan Yurub, Aasiya iyo suuqa Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono saaxiibkaaga muddada dheer Shiinaha.
Batroolka Li-po 605890 3.8V 4900mAh Baytariga Loogu talagalay Hadalka Bluetooth, Toy, Bangiga Awoodda
Bateriga dib-u-buuxin kara ee PLM-605890 3.8V 4900mAh ayaa isticmaalaya waxyaabaha ugu fiican ee leh awoodda ugu sarreysa ee suurtagalka ah macaamiisha caadiga ah. Amarada OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa codsiyo kala duwan, ganacsigeenu wuxuu daboolayaa inta badan Yurub, Aasiya iyo suuqa Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono saaxiibkaaga muddada dheer Shiinaha.
Gaaska Dheecaanka Gaaska Halis Hal Battery Alarm Battery ERT-04 3.7V 4600mAh Polymer Lithium Battery for Detector Gas Detector
Bateriga dib loo soo celin karo ee PLM-ERT-04 3.7V 4600mAh ayaa isticmaalaya waxyaabaha ugu fiican ee leh awooda ugu sareysa ee suurtagalka ah macaamiisha caadiga ah. Amarada OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa codsiyo kala duwan, ganacsigeenu wuxuu daboolayaa inta badan Yurub, Aasiya iyo suuqa Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono saaxiibkaaga muddada dheer Shiinaha.